सानो सेक्रेट | Infomala
♦ पंचम अधिकारी ♦
सुविनलाई अत्यन्त हतारो थियो । यसै पनि बाहिर जाने भनेपछि उसका खुट्टा खरायोका जस्ता हुन्थे । डेढ महिना छोटो समय होइन । समुद्र जाँदा, बास्केटबल खेल्दा, साइक्लिंग गर्दा, नेचर हाइक जाँदा, पौडी खेल्दा जेजसो गर्दाका निम्ति होस् तदनुसारका उसका पोशाक थिए । सि.डी., किताब, रंगीन कलमहरू र चुनिन्दा खेलौनाहरू छुटाउनु हुन्थेन । ती सबै कोच्दा बडेमानका तिन झोला भरिए । मामुले तयार गरेको चौथो झोला खुसुक्क उसले घिसार्यो ।
नेपालबाट ल्याएको एउटा फोटोएल्बम बाबुको दराजमा थियो । चौथो झोला घिसार्नुअघि उसले त्यो चाखपूर्वक पल्टाएको थियो । सानुबाका दुइटा छोराछोरीलाई उसले फोटोमा गौर गरेर हेर्यो । एक उसकै समवयी भाइ थियो, अर्की ३ वर्षले कान्छी बहिनी थिई । काठमान्डु सहरको डाँडापारीको पाखोमा सानुबाको घर थियो । उनीहरूको नेपाल बसाइँ त्यहीँ हुनेवाला थियो ।
उसका स्कुले साथीहरू भाइबहिनीका कुरा गर्थे । सँगै खेल्दाका रमाइला प्रसंगहरू भन्थे । एक्लो सन्तान भएकोमा उसको ठूलो गुनासो थियो । ब्याग खोज्दै आएकी मामुलाई उसले “मलाई बहिनी चाहियो” भनेर फेरि माग्यो । “भन्दाभन्दै बहिनी फुत्त निस्कन्छे ?” उसकी मामुलाई अर्कै रन्को थियो, प्वाक्क भनी ।
घरको सन्नाटाले उसको मन कुँढीएको थियो । एक्वारियमका माछासँग कति कुरा गर्नु ? उसका सहकक्षीहरू बाजेबज्यैको कुरा गर्थे । अरूका निम्ति सप्ताहन्त भनेकै बाजेबज्यै भेट्ने दिन थियो । उसले भने भिडियो च्याटमा कुरा गरेर मन बुझाउनु पर्थ्यो । परिचय-पत्रमा जन्मस्थान नेपाल लेखेको भए पनि उसको सुद्धीमा नेपाल भन्नु नक्साको चारपाटे चित्र मात्र थियो । कुन अक्षांश र देशान्तर हो कन्ठस्थ थियो । गुगल म्यापमा ‘जुम इन एन्ड आउट’ गरेर हेर्थ्यो । प्लेन चढेर एक्लै जान उमेरको छेकबार नभएको भए सायद ऊ पहिल्यै पुगीसकेको हुन्थ्यो ।
सारा अमेरिकामा नेपाली विरासतको उसको एउटै बालसखा थियो- प्रविण । दस वर्षको उमेरमा अमेरिका आएकोले उससँग नेपालका अनुभव धेरै थिए । प्रविणका बाल्यअनुभव सुनेर उसले नेपालबारे एउटा तस्बीर बनाएको थियो । उसको तस्बीरमा त्यहाँका मान्छेले दिनमा दुई पटक भात खान्थे, विशेष खालको लुगा लगाउँथे र होमवोर्क नगर्ने विद्यार्थीलाई शिक्षकले बेस्करी चुट्थे ।
प्रविणले नेपालबाट एक जोर नेपाली पोशाक ल्याएको थियो । नलगाउँदै सानो भयो । उसले त्यो सविनलाई उपहार दिएको थियो । त्यो लगाएर सुविनले एउटा तस्बीर समेत खिचाएको थियो । उसको मनमा थियो, सायद नेपालका सबै मान्छेले त्यस्तै लुगा लगाउँछन् की ! होइन भने राष्ट्रिय पोशाक कसरी भयो ? उसले नेपाली रूपरंगको त्यो फोटो खोतलखातल गर्दै थियो । उसकी मामुले तिन गुन्टा देखी हाली ।
“हरे ! यत्रो सामान ।” उसले निहुरिएर सुविनको दुई पाखुरामा च्याप्प समाती । मामुको फकाउने काइदा उसले बुझीहाल्यो । मायालु शब्दमा के-के भन्ने हो र अन्तमा एक चुम्मा दिएर निर्णय लाद्ने त हो ।
सुविनको ब्याग स्वाट्टै छाँटिएका भए पनि काठमान्डु लगिने ब्यागेजहरू थुप्रै थिए, जुन उपहारले भरिएका थिए । त्यसमध्ये उसको रोजाईमा किनीएका दुइटा हेलिकोप्टर (जुन ब्याटरी राखेपछि मात्र चल्थ्यो) थिए, नेपालका भाइबहिनीलाई उसको तर्फबाट खेलौना उपहार ।
काठमान्डुमा उत्रेपछि ऊ जहाँ पुग्थ्यो, त्यहीँ ट्वाल्ल पर्थ्यो । यत्र-तत्र सर्वत्र थुक्ने बटुवाहरू, बाटो कुरिरहेका साँढेहरू, गस्ती लगाइरहेका भुस्याहा कुकुरहरू सबै नौला थिए उसलाई । ऊ बसेको ठाउँमा कुकर समेत शिष्ट देखिन्थे । मान्छे देख्दा ति दुर्लभै भुक्थे।
सानुबाको गाउँमा उसले खाएको, लाएको, बोलेको, खेलेको र हिंडेको हरेक कुरामा गहिरो अभिरूचिका साथ अवलोकन गरिने र टिकाटिप्पणी गर्नेहरूको केन्द्रमा आफूलाई पाउँदा ऊ अचम्मित थियो । मानौं कि उसले सुन्दै आएका कथाहरूको राजकुमार ऊ स्वयं हो । एउटा फुच्चे केटोका बारे कति धेरै टिकाटिप्पणी !
“ओहो, बोली पनि कस्तो ? अम्रिकानेले नेपाली बोले जस्तो !”
“ओहो, लाको पनि कस्तो ? देख्दैमा किमती होला जस्तो !”
“ओहो, जीउ पनि कस्तो हर्लक्कको ! हैन, के खान्छ यो बाबुले त्यस्तो ?”
सुविनको बाबुको तन अमेरिका भए पनि मन नेपाल मै थियो । उताभन्दा यताको राजनीतिबारे ज्यादा अभिरूचि र जानकार थियो । उताको प्रगति र हालखबरले भन्दा यताको समाचार र दुर्गतिले मन छुन्थ्यो । त्यसैले गाउँको विकास र प्रगतिबारे चासो राखेर प्रश्न गर्थ्यो । ईस्टमित्र एवं छिमेकी र तिनका छोराछोरी के गर्दैछन् ? सोध्थ्यो । सानुबा फलानोले जागीर खायो, फलानोले बच्चा पायो, ढिस्कानो विदेश गयो विस्तार गर्थ्यो । समाज मात्र होइन राज्य-संरचना पनि बेस्करी बदलिएछ । यही गाउँमा सुविनको बुबा जन्मेर हुर्किएको थियो । अहिले सात वर्षपछि फर्कंदा पर्यटकले जस्तो अनगिन्ती प्रश्नहरू सोद्धैथियो ।
बन्द-हडताल भए ट्राफिक घट्छ र पानी परे धूलो बेहोश हुन्छ, नत्र काठमान्डुमा यतिको धुँवाधूलो र ट्राफिक जाम सामान्य हो । मोटरसाइकलमा एक फन्को मारे अनुहारभरि एक पत्र कालो लेपन लाग्छ । बस चढे एउटा कामले दिन जान्छ । बिजुली-टेलिफोनको तारबार उस्तै हुन्- गन्जागोल । आँखाको बानी बिग्रिए, एकाध महिना बसेपछि बानी पर्ला । धेरै बोल्नु हुँदैन, फुईं लगायो भन्न बेर लगाउँदैनन् । अनर्थ लाग्न सक्थ्यो । चर्मचक्षुले जे देखे पनि दुनियाँलाई दृष्टिगोचर गर्ने त भित्री नजरले हो । फूलको नजरमा फूलै संसार ।
सुविनकी आमाले उपहारहरूको सुटकेस खोली । सबैको भागमा केही न केही थियो । सुविनले हेलिकोप्टर निकाल्यो र भाइबहिनीलाई दियो । मुखले ‘तिम्रो लागि’ भन्यो तर हेलिकोप्टर आफैले राख्यो । कसरी चलाउने ? सिकाउन बाँकी नै थियो । नयाँ प्रविधि देख्दा भाइबहिनी चकित भए । त्यो नयाँ प्रविधि– यो दुनियाँको लागि नयाँ त होइन, अनु र नवीनको लागि नितान्त नयाँ थियो ।
सुविन जत्तिकै उत्साहित थिए- नवीन र अनु । अमेरिकी जीवनबारे अनेकौं प्रश्नहरू थिए । उनीहरूलाई अमेरिका भनेको अर्कै ग्रह जस्तो लाग्थ्यो, फरक खालका मान्छेहरू बस्ने अर्कै ग्रह । हरेक सन्दर्भमा विस्तृत जानकारी चाहन्थे । सुविनलाई सामान्य लाग्ने कुरा पनि नवीन र अनु रमाइलो मानेर सुन्थे । तिनको चाख र आज्ञाकारिता देख्दा यी प्रविणभन्दा फरक रैछन् भन्ने सुविनलाई लाग्यो । यसअघि मातृभूमिका यावत् कुरालाई उसले प्रविणको उदाहरण र नजरबाट देखेको र सोचेको थियो ।
जागिर, काम वा घुमघाम सकेर बेलुकीपख मान्छेहरू गफिन आउँथे । तिनको चाख अमेरिकी जीवनको सौन्दर्य र चुनौतिबारे हुन्थ्यो । धेरैसँग प्रश्नोत्तर ढाँचा एउटै थियो । नेपालीहरू के गर्छन् त्यहाँ ? सोध्दथे । प्रगति गर्नेले के/कसरी गर्छन त्यहाँ ? निदीखुदी गर्दथे । अन्तमा ‘तपाईं के गर्नुहुन्छ ?’ मा आइपुग्थे ।
“रेष्टुरेन्ट छ । ८/१० जना कामदार छन्”, सुविनको बुबाको जवाफ एउटै हुन्थ्यो सबैलाई । देशदेशावर घुमेका भए तिन्ले छिटो कुरा बुझ्थे । अनाडीलाई कुरा प्रष्ट होस् भनेर पुच्छरमा सुविनको बुबाले थप्थ्यो- “यता जस्तो होइन उता । ज्यादै सिस्टममा पो चल्नुपर्छ ।”
“भाते होटल होइन, फाइभस्टार जस्तो भन्नुस् । हामीले कुरा बुजेम”, यौटो बुझक्कडले भनेको थियो ।
“त्यता हामीलाई काममा लैजान मिल्दैन ?” अर्कोले सोधेको थियो ।
चिन्नु न जान्नु ढुङ्गाले हान्नु ! सामान्य चिनजान मै झ्याप्पै गहिरो बोल्ने मान्छेलाई के भन्नु ? जे भने पनि (वा नभने पनि) छुच्चो चाहिँ किन हुनु ?
एकछिन अन्कनाएर सुविनको बुबाले भन्यो- “यसपाली बाआमालाई लैजाने प्रोसेसमा छु ।”
“बाआमा त घुम्न जाने होला नि ।” उसले जोर गर्यो- “तपाईंको रेस्टुरेन्टमा काम गर्न लैजानोस् भनेको क्या !”
“तपाईंको त राम्रै जागीर छ क्यारे । किन दुःख रोज्नुन्छ ?” उसले तर्साउन खोज्यो ।
“डलर साटे रूपियाँ त टन्न हुन्छ नि ।” उसले कारण जनायो ।
“हेर्नुस्, हिसाब त्यति सजिलो छैन । यता जस्तो होइन उता । धेरै कर बुझाउनुपर्छ । धेरै कागज मिलाउनु पर्ने हुन्छ ।” ऊ आफै तर्कन खोज्यो ।
“डोनाल्ड ट्रम्प आएपछि कडा भो की त ?” अघिल्लो बुझक्कडले भनेको सुनियो ।
कुरा मोडियो, सुविनको बुबालाई राहत मिल्यो ।
सडकको दुईतिर, तिनीहरूले दुई ढुंगाको कापलाई गोलपोष्ट माने र फुटबल खेल्न थाले । खेल शुरू हुनुअघि एउटाले एक अतिरिक्त नियम सुनायो- बल बेस्करी सुट गर्न पाईंदैन । उसको संकेत सडकको उतापट्टि काँढेतारतिर थियो । तिनको खेल हेर्न केही भुन्टाभुन्टी दर्शक पनि वरपर थिए ।
तिमध्ये एकले रोनाल्डो र अर्कोले मेस्सीको नामाकिंत टि-सर्ट लगाएका थिए । टि-सर्टका नाम देख्दा लाग्थ्यो- हो की मिनी विश्वकप ! उद्देश्य के लिनु- एक गोल थप !
खेल मच्चिंदै गर्दा बल आउट भएको थियो । दर्शक बनेको एक केटोले लात्तीले बल फर्कायो । दुर्इ जना केटाहरू उत्तेजित भएर बल किन बेस्करी लात्तीले हानेको भनेर खै-खै गर्न थाले । खैरो पोशाक (कपडा कै रंग हो वा मैलोले) लगाएको त्यो केटोको सर्ट टिपिक्क सानो थियो र बाहुलाले नाडी ढाक्न मुस्किल देखिन्थ्यो । उसको गालामा कोठी थियो । पिंडौला दधार्ने गरी कन्याउन ब्यस्त थियो । ठिक त्यसैबेला अगाडि आएको बल एक लात्ती हानेको थियो ।
“किन लात्ताले हानेको ? हातले समातेर दे”, जंगिदै राकेशले भन्यो । उसको ज्यान पनि खाइलाग्दो थियो । सर्लक्क मिलाएको कपाल र गठिलो तिघ्रा देख्दा उसको आकृति उमेरको हद नाघ्नै लागेको विद्यार्थी राजनीतिकर्मी जस्तो प्रतीत हुन्थ्यो ।
“फुटबललाई लात्ताले हानेर दिंदा ठिकै छ त !” सुविनले सुधो टिप्पणी गर्यो । नवीनले काननेर आएर खासखुस कुरा गर्यो- “त्यो श्यामे गिट्टीवालाको छोरो हो क्या ।”
बाउआमाले गिट्टी कुट्छन् त के फरक पर्यो ? सुविनले कुरोको भेउ पाएन तर खेल शुरू भैसकेको थियो । बलको पीछा गर्न थाल्यो ।
डिलनेर श्याम न्याम्म परेर हेरिरहेको थियो । उसको पारा नून खाएको कुखुरा जस्तै थियो- हेर्न पनि नछोड्ने, झोक्राउन पनि नछोड्ने । अनुहार हेर्दा निद्रा नपुगे जस्तो देखिन्थ्यो । फेरि नजिकै आइपुगेको बल कसैले ड्याम्म किक हान्दा ऊ झसंग भएको थियो । गोल हुँदा अरू दर्शक ताली ठोक्थे । ऊ झिंझो माने झैं देखिन्थ्यो । घरी ऊ चप्पल नलगाएको खुट्टाका औंला गनेर बसीरहेको हुन्थ्यो । उसको ताल देख्दा सुविनलाई टीठ लागेर आयो । गएर उसले सोध्यो- “तिमी पनि बल खेल्ने ?”
ऊ बोलेन तर स्वीकारोक्तीमा टाउको हल्लायो ।
यो कुरा सुविनले नवीनलाई भन्यो । नवीनले मिलनलाई भन्यो । मिलनले राकेशलाई भन्यो । जसले सुविनलाई अर्थ्यायो- “उसले बल किन्न पैसा हालेको छैन । खेल्न पाउँदैन ।”
“मैले पनि त हालेको छैन ।”
“तिमी त विशेष गेस्ट हो नि ।”
“ऊ झन् यहीँको मान्छे ।”
“हेर, यहाँको कुरा तिम्लाई के थाहा ? उसले त पैसा हाल्न पनि पाउँदैनँ ।” राकेशले भन्यो- “हामी पढ्ने, खेल्ने तरिकै फरक छ । ऊ उताको सरकारी स्कुलमा पढ्छ । हाम्रा बाबामामुले त्यस्तोसँग संगत गर्नु हुँदैन भन्नुभाछ । संगत बिग्रन्छ भन्नुभाछ ।”
ऊ यस्तो प्राधिकारको स्वरमा बोल्दै थियो कि सुविन अवाक् भयो ।
त्यतिखेरै सुविनको खुट्टामा बल आईपुग्यो । कसलाई पास दिनु ? पछिल्लो स्थितिमा ऊ तम्तयार थिएन । उसले पोष्टतिर भएभरको बल लगाएर सूट गर्यो । त्यो बल बत्तिंदै गयो, र सुनाइएको नियमविपरित, काँढेतारमा झुन्डिन पुग्यो । खेलाडिहरू उफ्रँदै बल समात्न पुगे । उनीहरूको संदेह जस्तै बल गिलो थियो ।
बल समात्ने पहिलो केटो करायो- “बल फुट्यो ।”
ति सबै एकैचोटी कराए- “बल फुट्यो ।”
“अब पैसा उठाउनुपर्छ”, त्यो खाइलाग्दो, ज्यानवाला केटोले भन्यो ।
केहीबेरदेखि सुविनको दिमागमा अर्कै कुराले डेरा जमाइरहेको थियो । अमेरिकाको यौटा घटनाप्रति उसले गहिरो गुनासो साँचीरहेको थियो । बास्केटबल खेल्न जाँदाको कुरा हो, एउटा गोरे समवयीले बारम्बार ‘पाकी’ भनेर बोलाउँथ्यो । त्यो उसलाई सरासर अनादर लाग्थ्यो । उसले म पाकीस्तानी होइन भनेर तुरून्तै स्पष्ट पारेको पनि थियो । तर उसको बोलीमा न मिठास आयो न मिजास । उसले पाकी भन्न छोडेन । बरू उल्टै अर्कोले पनि त्यसै भन्न थाल्यो । एक हप्तासम्म सुविन ठुलो तनावमा थियो । पछि कसैले सम्झाईदियो र थामथुम भयो । तर उसको दिमागमा त्यो शब्द प्रेतात्मा जस्तो भएर तर्साईरहन्थ्यो । त्यसैको कारणले गर्दा उसलाई त्यतिखेर अमेरिकाप्रति नै वितृष्णा भएको थियो । होइन, होइन, उसले अमेरिकालाई पटक्कै मनै नपराएको चाहिँ होइन, त्यो केटोको चुत्थो बोलीले क्रसफायरमा परेको मात्र । चित्त नबुझेपछि कहिलेकाँही आँखा देखिंदैन ।
“बल म किन्छु ।” सुविनले घोषणा गर्यो । सबै खुशी देखिए । “मेरो बल उसले पनि खेल्छ ।” सुविनले डिलको श्यामलाई संकेत गर्यो ।
भुन्टाभुन्टी दर्शकहरू फुटेको बल उफार्दै थिए । तिनले एउटै भाकामा गाए- “बल कस्ले किन्छ ? सुविनले । … बल कस्ले किन्छ ? सुविनले ।”
खेलाडिहरूले ति दर्शक केटाकेटीलाई कर्के नजरले रिसले हेरे । ति आफ्नै सुरमा चिरबिर गरिरहेका थिए ।
सुविन बल किन्ने पैसा माग्न बाआमा खोज्न गयो । सुविनको पछि लाग्यो- नवीन । उनीहरूले बल किनेर ल्याउँदा खेल्ने ठाउँमा कुनै खेलाडि थिएनन् । एउटा ढिस्कोमा बसेर एउटा केटो माटो खोस्रीरहेको थियो ।
“आऊ, बल खेलुँ”, सुविनले निम्तो दियो ।
तर ऊ केही बोलेन । सायद उसलाई लाग्यो- बोल्नु हुँदैन, बात लाग्छ । न ढिस्कोबाट उठ्यो । पुर्लुक्क निद्रालु आँखाले हेर्यो र त्यही माटोमा धस्सीईरह्यो । मुस्कुराउन असमर्थ उसका ओँठमा पत्र-पत्र कलेटी थिए ।
सुविनले टाठा आँखा कुर्यो । तर त्यो ‘संगत बिगार्ने केटा’ आएन । उसले त्यो बल त्यही केटासामु छोड्यो- “यो तिम्रो भयो ।”
सुविनको बुबाले सुविनलाई बोलाएर केही कागज फोटोकपी गर्न पठायो । बाआमालाई अमेरिकाको भिसा लगाउन कागजात तयार पार्दै थियो ऊ । सुविनले नवीनलाई साथी लिएर गयो । फोटोकपी गर्ने क्रममा कागजहरू नमिस्सियोस् भनेर सक्कल सुविनले राख्यो र नक्कल नवीनलाई लिन भन्यो । अमेरिकाको कागज, बाजेबज्यै लैजाने भनेर नवीनले बडो जतनले ति कागज लियो । एकछिनपछि उसले सुविनलाई सोध्यो- “यो ‘एसिस्टेन्ट कूक’ भनेको के हो, दादा ?”
“हैन, नेपालीमा त मैले बुझेँ । अंकल त साहु हो नि । यो तलबको कागजमा पेशा भनेर यस्तो पो लेख्या रैछ ।”
“ओ भाई !” सविनले फतक्क गले झैं भन्यो र थचक्क बसुँला झैं गर्यो । उसले नवीनका हातका सबै कागजहरू ह्वात्त लियो । “यो तिमीले पढ्न हुन्थेनँ ।”
“सरी ।” नवीनले भन्यो । ऊ कालोनिलो भयो ।
“भैहाल्यो”, सविनले भन्यो- “खासमा बुबाको यो कागजमा जे लेखेको छ कुरा त्यही हो । साहु भन्ने कुरा त उहाँको सपना हो ।”
नवीनले सुविनलाई हेरीरह्यो ।
“बुबाले कसैलाई नभन्नु भन्नुभाथ्यो”, सुविनले नक्कल प्रतिलिपी नवीनलाई पुनः थमाउँदै भन्यो- “हामीबीचको यो सानो सेक्रेट है भाइ ।”
सुविनकी आमा वा बुबा एक-दुई दिन बिराएर सहर जान्थे र टन्न सामान बोकेर ल्याउँथे । खाद्यान्नदेखि घरायसी सामानसम्म । नवीन र अनुले दुई वटा दसैँ जोड्दा पनि यति कपडा र खेलौना पाएका थिएनन् । सबै परिवार कहिले कहाँ, कहिले कहाँ घुम्न गइरहन्थे । एक दिन ति केबलकार चढेर मनकामना गए, एकदिन गोदावरी, एकदिन ककनी, एकदिन चिडियाखाना गए र एकचोटी पोखरा पनि पुगे । यसअघि नवीन र अनुले रेस्टुरेन्टमा गएर कहिल्यै खाएका थिएनन् । कहिल्यै नखाएको, नलाएको र नगरेको कुराहरू मिलेको थियो । जहाँ जान्थे सुविनको बुबाले पैसा तिर्थे । सुविनको बुबा नभएको ठाउँमा सुविनकी आमा हुन्थिन्, तिर्ने बेलामा अघि सर्ने । यो कुरालाई छिमेकीहरूले पनि चाखपूर्वक हेरीरहेका थिए ।
दुई घर उतापट्टीका अधिकृत लेखापाल सुविनको बुबाको स्कुले साथी थियो । ति एकअर्कालाई तँपाईं होइन, तँ भनेर सम्बोधन गर्थे । स्कुलदेखि लागेको बानी ।
“ए अम्रिकाने, अब देश फर्कंदैनस् की क्या हो ?” उसले सोधेको थियो ।
“खै !” सुविनको बाबुले भनेको थियो । “यी केटाकेटीलाई पढाईबाट नउतारेसम्म त त्यस्तै हो ।”
“यताको माया लाग्दैन ?”
“लाग्छ, तर उतै बसेर दाल-भात-तरकारी खाने, नेपाली गीत-संगीत सुन्ने, नेपाली समाचार पढ्ने र नेपाली राजनीतिबारे गनगन गर्दा रहर मेटिन्छ ।”
“त्यसोभए ब्यापार-व्यवसाय राम्रैसँग फस्टाएको छ भनेर बुझ्नुपर्यो !” उसले फेरि भनेको थियो ।
त्यसपछि ऊ गलल्ल हाँसेको थियो, एक्लै । सरकारी निर्माणको काम हेर्नुपर्ने ठाउँको जिम्मेवार लेखापाल भएकोले र ठुलै बजेटमा काम गर्नुपर्ने हुँदा स्वर पनि ठुलै थियो उसको । त्यो चर्को स्वरले सुविनको बुबाको गरिमालाई किच्यो । हुँदाखाँदाको लेखापाल जागिर छोडी अमेरिकामा रेस्टुरेन्ट कामदार बनेर गल्ती पो गरियो की भन्ने अन्तर्बोध भए जस्तो लागेथ्यो ऊ फेरि सम्हालियो र व्यवसायी झैं अदबमा खडा भयो । खुट्टा दरो गरेर टेक्यो र आत्मबल बढाउन सोँच्यो- पहिलो विश्वमा बसीसकेको मान्छे को पो फर्कन्छ र तेस्रो विश्वको यो पाखामा !
अनि लेखापाल मित्रले सुविनकी आमातर्फ फर्कंदै सोधेको थियो- “ए भाउजू, यसलाई फकाउन पर्यो ।”
“अब मलाई घर भन्नु जहाँ छोराछोरी र श्रीमान् छन् त्यहीँ हो बाबु ।” सुविनकी मामुले भनेकी थिई ।
“अरे बाबा !” सुविनको बाबुले भनेको थियो- “अहिले पो मालदार अड्डामा छस् । भोली सरूवा भयो भने तैँ खुट्टा उचाल्न बेर लाउँदैनस् ।”
“धेरै हल्ला नगर । ट्रम्पले लखेटे यहीँ आउनुपर्छ”, मित्रले भनेको थियो ।
सुविनका बाजेबज्यैको भिसा लाग्यो । सबै अमेरिका फर्कने दिन आयो । छिमेकीहरू जम्मा भएका थिए । कुनै महान यात्रामा जान लागेका योद्धाको विदाई जस्तै भएको थियो वातावरण ।
त्यो सानो भिडमा कोही सुविनका नयाँ बनेका साथी र तिनका अभिभावक थिए । कोही बापुस्ताका मित्र थिए । निन्याउरा नवीन र अनु छेउ मै ठिङ्ग उभिएका थिए । उनीहरूको आँखाको चेपचेपमा छिपछिप भिजेको थियो ।
पर-पर फाट्टफुट्ट टिन टल्केको आकाश छुने हरियो पहाड थियो । पहाडमाथि सेता बेलुन जस्ता बादल उडिरहेका थिए । त्यही पहाडको नेटोबाट पल्लोपट्टीको काठमान्डु सहर अचाक्ली रमाइलो देखिन्छ रे भनेको सुविनले सुनेको थियो र उसले फकाएर त्यहाँ जान नवीनलाई मनाएको थियो । नवीनले आफूभन्दा अल्ली ठूलो राकेशलाई भनेको थियो । राकेशले ऊभन्दा अल्ली ठूलो एउटा झकास केटोलाई भनेको थियो । उनिहरू बतास झैं खोल्सोतिर गएका थिए । खोलाको किनारमा गर्दन तन्काउँदै बसेका बकुल्लालाई ढुंगा हानेर भुर्र उडाएका थिए र उकालो लागेका थिए । त्यो पहाडतर्फ उक्लँदै गर्दा सुन्तलाको मन्द बासना तलतिर झरिरहेको थियो । ५०-६० खुट्किलामाथिको ढिस्कोमा दुइटा अधबैंसे ढुंगामाथि टाङ फैलाएर बसेका थिए । उनीहरूलाई देख्नेबित्तिकै जर्याक्क उठे । राकेश र झकास कुलेलम ठोकीहाले । उनीहरूले सुविन र नवीनलाई च्याप्प समाते ।
“ए कुखुरा चोर ! फिर्ता गर !” ति पालैपालो कराए ।
“आज कुखुरा चोर्नेले भोली बैंक डाँका मार्छ”, अलिक उतापट्टी एउटा बुझक्कड कराउँदै थियो । एकछिन केरकार गरेपछि उनीहरू बल्लतल्ल छुटेका थिए । तर सुविनको सातो गएको थियो । उसले घाँटी तन्काएर त्यो पहाडतिर हेर्यो र फर्किएको थियो ।
आँगनको छेउमा लुते कुकुर जुरूक्क उठ्यो र ढाड झट्कार्यो । त्यसको जिउबाट बुरूरू धूलो उड्यो । ‘धत्, कैले’ भनेर एउटाले जुत्ता बजारेको थियो त्यो कुईंकुईं गर्दै आँगनको डिलमा गयो र भुक्न थाल्यो । कुकुर भुक्दा क्वाँरक्वाँर कराइरहेका धुलाम्मे कुखुरा तर्सिएर भागे ।
जब झोलाहरू पिंढीमा थुपारिए, सुविनको मुटुको धड्कनले बेस्करी पिट्न थाल्यो । उसले झोलामा बुट्टेदार दुइटा साना ढुंगा राखेको थियो । त्यस्तो ढुंगा उसले अमेरिकामा कहिल्यै देखेको थिएन । एउटा आफ्नो एक्वारियमका लागि र अर्को प्रविणको निम्ति- मायाको चिनो । ढुंगा त सानो प्रतिरूप न थियो ऊसँग वर्णनीय र अवर्णनीय अनेकौं किस्सा बनेका थिए । उसो त यो बस्तिमा ऊ स्वयं एउटा किस्सा बनेको थियो ।
छेउछाउमा उभिएका आइमाईहरू मौन आँखाले हेर्दै थिए । सुविनले अमेरिकी लबजमा नेपाली बोलेको ति असाध्यै रमाइलो मानेर सुन्थे । नेपाली लबजमा अँग्रेजी बोल्ने केटाकेटीहरू चाहिँ सुविनको अँग्रेजी बोल्ने लबजसँग आकर्षित थिए, मानौं की ति कुनै विदेशी पर्यटकसँग कुरा गरिरहेका छन् । त्यो सब मिस हुनै लागेकोमा थकथकी थियो सायद ।
अमेरिका जान उत्सुकवाला पनि त्यहाँ उपस्थित थिए । सुविनको बुबाले कुनै जुक्ति निकाल्लान् की भन्ने झिनो आशा थियो उनीहरूमा । आज पनि तिनले पुनः एक पटक त्यो इच्छा जाहेर गरेका थिए । त्यसको मतलब प्रवीणले ‘सानो सेक्रेट’ कायम राखेको प्रमाणित हुन्थ्यो ।
श्याम चप्पल पड्काउँदै आयो । त्यो चप्पल उसको दाइ वा बाउको हुनुपर्छ । उमाथि सुविनको नजर परेको थाहा पाउने बित्तिकै मुसुक्क हाँस्यो । ऊ त्यसरी हाँसेको सुविनले पहिलो चोटी देखेको थियो । सुविन ऊ नजिक गयो, टक्क अडियो र अँगालो हाल्यो । न्यानो अँगालो । उसका आँखा निद्रालु थिएनन् । टिलपिल आँसुले भरिएर टल्केका थिए ।
जुन १०, २०१७ शनिवार, पहिलोपल्ट सेतोपाटी डटकममा प्रकाशित
Previous Postतिम्रो लोग्ने खै ?
Next Postउफ्! युरोपमा हुर्केका केटाकेटी …
Post category:आख्यान / बिन्दास पाठक / साहित्य